Imishini Yokwenza Utamatisi Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Umshini Wotamatisi Wososo
Umshini wePasta nemishini yeSpaghetti
Imishini yokuthosa yaseFrance
Umshini kamaskandi othambile
Imishini yenhlanzi ekheniwe
Okokusebenza okwenziwe kabusha kukabhiya
Imishini encane yeyogathi
Izithelo nemifino kokoma nokupakisha umugqa wonke
Umshini wokudla okusemathinini nemishini yokukhiqiza yeJam
Umshini wokuhlanza amanzi ohlanzekile
Isiphuzo se-Carbonated nesiphuzo se-soda isiphuzo
Imishini yesiphuzo nolayini wokukhiqiza
I-Apple, eliphakathi kwe, amagilebhisi, ipomegranate processing machine a ...
Umnqumo, iplamu, i-bayberry, ipentshisi, ibhilikosi, iplamu processi ...
Amajingijolo, ijikijolo, kamalibhele, sitrobheli, raspber ...
Imango, uphayinaphu, upopo, umshini wokucubungula ugwava a ...
Inkaba orange, ezisawolintshi, ubhamubhamu, ulamula ukucubungula m ...
Utamatisi unamathisela, umshini wokwenza upelepele we-chili kanye ne-pro ...
Utamatisi unamathisela, umshini wokucubungula u-chili sauce nomugqa wokukhiqiza
I-JUMP MACHINERY (SHANGHAI) LIMITED ngumphakeli wokuqala wase-China we-turnkey ephelele umugqa wokukhiqiza utamatisi. Ngokubambisana nokuxhumana ne-Italy ne-Germany FBR / Rossi / FMC nezinkampani eziningi, kuhlanganiswa izici zobuchwepheshe zabalingani bakwamanye amazwe.
Inkaba ye-orange, i-citrus, i-grapefruit, umshini wokucubungula ulamula nolayini wokukhiqiza
Inkaba ye-orange, i-citrus, i-grapefruit, ulayini wokukhiqiza uchungechunge kalamula ikakhulukazi ufaka imishini yangaphambi kokwelashwa, imishini ye-juicing esezingeni eliphakeme kakhulu e-China, imishini yokuhlushwa ujusi we-orange, i-asteurization kanye ne-UHT yokugcwalisa ithubhu nemishini ebalulekile yokukhipha uwoyela njll.
Amajingijolo, ijikijolo, kamalibhele, sitrobheli, okusajingijolo, i-bayberry ebomvu, umshini wokucubungula i-cranberry nomugqa wokukhiqiza
Amajingijolo, amajikijolo, amabhele, amajikijolo, okusajingijolo, i-bayberry ebomvu, umshini wokucubungula i-cranberry nomugqa wokukhiqiza ungakhiqiza ujusi ocacile, ujusi we-turbid, i-juice concentrate, i-powder yezithelo, ujamu wezithelo neminye imikhiqizo.
I-Apple, ipheya, amagilebhisi, umshini wokucubungula wehalananda nomugqa wokukhiqiza
I-Apple, ipheya, amagilebhisi, umshini wokucubungula wehalananda nephakheji yomugqa wokukhiqiza: ibhodlela lengilazi, ibhodlela leplastiki le-PET, i-zip-top can, iphakethe elithambile le-aseptic, ibhokisi lezitini, ibhokisi le-gable phezulu, isikhwama se-aseptic se-2L-220L kudramu, iphakethe lebhokisi Amathini angama-70-4500g.
Umnqumo, iplamu, i-bayberry, ipentshisi, ibhilikosi, umshini wokucubungula iplamu nomugqa wokukhiqiza
Olive, iplamu, i-bayberry, ipentshisi, ibhilikosi, umshini wokulungisa iplamu nephakethe lomugqa wokukhiqiza: ibhodlela lengilazi, ibhodlela leplastiki le-PET, i-zip-top can, iphakethe elithambile le-aseptic, ibhokisi lezitini, ibhokisi eliphezulu le-gable, 2L-220L isikhwama se-aseptic kudramu, ibhokisi iphakethe, isikhwama sepulasitiki, i-70-4500g tin can.
Imango, uphayinaphu, upopo, umshini wokucubungula ugwava nolayini wokukhiqiza
Imango, uphayinaphu, upopo, umshini wokucubungula ugwava nolayini wokukhiqiza ulungele ukucubungula izithelo zasezindaweni ezishisayo ezifana nomango, uphayinaphu, upopoya, ugwava njalonjalo.